Abenzi basechina abenziwe ngokwezifiso baseChina, Abahlinzeki, Ifektri - Ikhotheshini - I-Dongguan Zhihao Handbag Industry Co., Ltd.
Ikhaya > Isikhwama okhalweni Isikhwama okhalweni > Isikhwama samantombazane okhalweni
(1) Isikhwama sesinqe, esibizwa nangokuthi okhalweni okhalweni noma okhalweni esikhwameni, seqe umugqa kusuka kuzinsiza zokuhamba kudala. Manje sekungukukhetha okusebenzayo, njengokujwayelekile njengobhaka noma izikhwama zokufaka isimo. Kunesizathu esihle salokhu: isikhwama okhalweni singazikhulula ngokuphelele izandla zakho, kepha sigqoke kancane. Vele, ibukeka ipholile, kepha futhi iyasebenziseka futhi iyasebenza.
I-Dongguan Zhihao Handbag Industry Co., Ltd. yasungulwa ngo-2003.Ibhizinisi lethu eliyinhloko ukuklanywa, ukukhiqizwa nokuthengiswa kwemikhiqizo yobhaka, enjengale: ojosaka be-laptop, izikhwama zesikole zabafundi, izikhwama zesikole, izikhwama ze-diaper, ojosaka bangaphandle, ojosaka bezemidlalo, ama-rucksacks, izikhwama zesikole zekhathuni kanye neminye imikhiqizo. Ngasikhathi sinye, siphinde sandise amanye amabhizinisi, njengokuklanywa kokuklama: izikhwama zebhande, izikhwama ze-duffel, izikhwama, izikhwama zamathuluzi, izikhwama zasemini, izikhwama zesibhamu, izikhwama zamasosha ezempi, izikhwama zezilwane neminye imikhiqizo. Ukuze kuhlangatshezwane nezidingo zamakhasimende, sisungule nomnyango ozosiza amakhasimende ukuthi athole ezinye izigaba zezimpahla eChina. E-China, sine-supply chain eqinile futhi evuthiwe engenhla neyaphansi. Lokhu kuyinzuzo yethu eyinhloko eyinhloko. Ngenxa yalolu sizo, singawahlinzeka wonke amakhasimende ethu ngokushesha, kangcono nangcono, futhi sinikeze amakhasimende ethu izinsiza zokwenza ngokwezifiso zomkhiqizo kahle, singaphinde sinikeze ngemikhiqizo yethu yekhwalithi ephezulu yekhwalithi kumakhasimende ayathengiswa. Abasebenzi bethu abangama-600 nemishini yokukhiqiza engama-500 yizimpahla zethu ezinkulu. Sikugcina kanjani isikhundla sethu sokuhola? Sibeka phambili ukuxhumana phakathi kwabantu, futhi sibeka phambili ukuvikela amalungelo abantu abasebenzi kanye nokuvikela amalungelo amakhasimende. Indawo yokusebenzela engamamitha-skwele ayi-18,000 isivumela ukufaka izinto zokukhiqiza eziningi kanye nabasebenzi bokukhiqiza, futhi sinikeze izinsizakalo kumakhasimende kusuka ekwakhiweni komkhiqizo, ukukhiqizwa kwesampula, ukukhiqizwa ngobuningi, ukuthuthwa kwempahla, kanye nesimemezelo samasiko. Uma udinga ukwenza ngezifiso imikhiqizo yobhaka noma ukumela umkhiqizo wethu, sicela uxhumane nathi:adamdavis@fofrerbag.com
1. Ukwethulwa komkhiqizo wesikhwama okhalweni:
Imikhawulo yomkhiqizo we-Waistpack (imininingwane)
FOFRER incazelo yesibongo
Kungenziwa egcizelele nge-OEM
Izinto zingaguqulwa njengoba kudingeka
Isikwele esime mpo
Umbala ungashintshwa njengoba kudingeka
Ubude 28cm X Ububanzi 11cm X Ukuphakama 13cm
Usayizi ungashintshwa njengoba kudingeka
1 umkhiqizo esikhwameni seplastiki esingu-1, imikhiqizo eyi-10 ku-carton
OEM, ODM, Brand ejensi
Isisindo esikhulu somkhiqizo
3. Imboni shot real display
4. Ukupakisha kwephakethe nokulethwa
(1) Iyunithi yokuthengisa: ngayinye.
(2) Usayizi wokupakisha ongashintshi owodwa: ubude obungama-28cm X ububanzi obuyi-11cm X ukuphakama okungu-13cm, singenza ngokwezifiso usayizi wokupakisha wokuklama ngokuya ngezidingo zakho, ukuze sikusindisele impahla.
(3) Ukupakisha sebhithi: 30cm X 39cm X 40cm. 60PCS / ibhokisi. Impahla yekhathoni: K = K ungqimba lukathayela olujiyile oluyizingqimba ezi-5.
(4) Isisindo esikhulu sebhokisi lonke: 7.5Kg.
(5) Isisindo sisonke sebhokisi lonke: 6Kg.
(6) Indlela yokuhamba: ulwandle, umoya, umhlaba. Sizokhetha indlela enhle kakhulu yokuthuthwa kwempahla.
(7) Singakha indlela yokupakisha engabizi kakhulu, kepha lokhu kuzodela izinto ezithile futhi kungadala ushintsho ekubukekeni komkhiqizo. Ngokuvamile asikhuthazi amakhasimende ukuthi asebenzise le ndlela.
(8) Uma kunesidingo, sizoklama ukufakwa kwalesi sikhwama se-baseball ngokuya ngezidingo zakho.
(9) Uma udinga isampula yalesi sikhwama se-baseball, sizokhetha ukusithumela ngendiza.
5. Isevisi yokuthengisa ngemuva
(1) Sizokwenza konke okusemandleni ukusindisa izindleko.
(2) Sizoxhumana njalo amahora angama-24. Sizosebenzisa ukuxhumana okusebenzayo ukuqinisekisa ukuxhumana kwemininingwane ebushelelezi.
(3) Ngemuva kokuthi isampula selithengisiwe, uma uhlelo lokuqala ludinga ukuguqulwa, sizoguqula isampula ngokwemininingwane yokuguqulwa. Yonke inqubo yokukhiqiza isampula ye-edishini yesibili imahhala ngokuphelele.
(4) Ibhokisi leposi lethu lenkampani lisebenza unomphela futhi linabasebenzi abangochwepheshe bamakhasimende. Ungasibhalela ukuze ubonisane nezikhalazo nganoma yisiphi isikhathi. Sizofunda futhi siphendule kahle nangokucophelela.
(5) Sizolawula ngokuqinile ikhwalithi yemikhiqizo futhi siyilethe kuwe nge-100% rate rate.
(6) Sizokwazisa ngenqubekela phambili yokukhiqizwa komkhiqizo we-oda ngesikhathi ngesikhathi senqubo yokukhiqiza, ukuze ukwazi ukuqonda isimo se-oda ngokushesha.
Q1. Kuthatha isikhathi esingakanani ukuthi ukwazi ukuxhumana nokuphendula?
A: Sizokuphendula kungakapheli amahora angu-4 ngemuva kokuthola i-imeyili yakho yophenyo.
Q2: Uyini umkhiqizo wakho wokukhiqiza ngobuningi?
(1) ubhaka wethu olula ukhiqiza izingcezu ezingama-50,000 ngosuku nezicucu eziyi-1,500,000 ngenyanga.
(2) Okobhaka abanobuciko obuyinkimbinkimbi, okukhishwa nsuku zonke izingcezu ezingama-3000 nokukhishwa kwanyanga zonke kwezi-100,000.
Q3. Singakanani isikhathi sakho ukukhiqizwa isampula phambili isikhathi? Ingabe unikeza amasampula? Ingabe kumahhala noma kuyengeziwe?
(1) Singakunikeza amasampula amahhala, kepha udinga ukukhokha imali ebonakalayo evela eChina iye ezweni lakho.
(2) izinsuku ezingu-7-10 zokusebenza zamasampuli enziwe ngezifiso, amahora angama-48 amasampula amabala.
I-Q4: Awufuni ukwakheka kwethu komkhiqizo, ungenza futhi ukhiqize ngokusho komdwebo wami wokuklama?
Impendulo: Yebo, singakhiqiza ngokusho komkhiqizo wemidwebo yakho.
Q5: Unawo umkhawulo we-MOQ?
Impendulo: Yebo, kuya ngezinga lenqubo yomkhiqizo wakho nobuningi bomkhiqizo.
Q6. Ingabe uyimboni noma ungumhwebi?
Impendulo: Singumkhiqizi wesikhwama waseChina, umenzi wesikhwama waseChina, hhayi umhwebi.
Q7. Yimiphi imigomo yakho yokukhokha?
A: <= 1000USD, 100% yokukhokha kusengaphambili.
B:> = 1000USD, 30% T / T kusengaphambili, 70% D / P ukuze ithunyelwe.
Q8. Siyini isikhathi sakho sokuhola sokukhiqiza ngobuningi ezinsukwini?
Umjikelezo wokukhiqiza womkhiqizo ongu-500-1000 izinsuku ezingama-30-35
Umjikelezo wokukhiqiza womkhiqizo we-1000-3000 izinsuku ezingama-35-40
Umjikelezo wokukhiqiza womkhiqizo ongu-3000-5000 izinsuku ezingama-40-45
Umjikelezo wokukhiqiza womkhiqizo we-5000-10000 izinsuku ezingama-45-50
Ngokwezinga lobuchwepheshe bokukhiqiza nobunzima bemikhiqizo eyenziwe ngezifiso, lungisa umjikelezo wokukhiqiza ongenhla. Udinga ukubheka izithombe noma amasampula ahlinzekiwe ukunquma umjikelezo wokukhiqiza onembile.
Q9. Iyiphi indlela yokucaphuna oyamukelayo? Zingaki izinsuku zesikhathi sokucaphuna?
(1) Thatha ikhotheshini yesithombe somkhiqizo, ucaphune ngokusalungiswa komklamo womkhiqizo, bese ucaphuna ngokwesampuli enikeziwe.
(2) Umjikelezo womkhiqizo owodwa wokucaphuna ungamahora ayi-12, kanti umjikelezo we-batch quotation izinsuku ezingama-2-3.
(3) Indlela yekhotheshini: intengo yangaphambili yefektri, i-FOB, i-CIF.
(4) Uma udinga ikhotheshini, sicela uqaphele indlela yekhotheshini, esivumela ukuthi sikucaphunele kangcono.
Q10. Singakanani isikhathi sakho ukukhiqizwa isampula phambili isikhathi? Ingabe unikeza amasampula? Ingabe kumahhala noma kuyengeziwe?
Q11: Ingabe uyakwamukela ukuhlolwa okuvela eceleni? Ungakwazi yini ukunikeza imibiko yokuhlolwa komkhiqizo? Injani ikhwalithi yakho yokukhiqiza?
(1) Yebo, siyakwamukela ukuhlolwa komuntu wesithathu.
(2) Umbiko wokuhlolwa komkhiqizo unganikezwa.
(3) Singumkhiqizi wojosaka beDisney baseball, izikhwama zeWal-Mart, nemikhiqizo yeSamsonite. Sicela uqiniseke ngekhwalithi yokukhiqiza.
Amathegi ashisayo: Isikhwama samakhanda eLadies, China, abenzi, abahlinzeki, ifektri, okwenziwe ngokwezifiso, intengo, ikhotheshini, kusitoko
Isikhwama sabesilisa okhalweni
Isikhwama esisebenza okhalweni
Isikhwama sebhande labesilisa
Isikhwama sebhande labesifazane
iphakethe lezintaba elinentaba